Duceysane, Author at Ceelhuur Online
Home > Articles Posted by Duceysane
March 7, 2020 Duceysane863
Tirada dadka laga helay cudurka dunida ku sii faafaya ee Coronovirus ayaa kor u dhaaftay boqol kun oo ruux sida laga soo xigtey Jaamacada Johns Hobkins University. Cudurkan ayaa waxaa gudaha dalka Shiinaha oo kaliya ugu geeriyootay dad ka badan saddex kun halka wadamada kale ee caalamka ay u dhinteen dad gaaraya 267 ruux oo […]
February 28, 2020 Duceysane725
Dowladda Kenya ayaa ka jawaabtay warqad shalay ka soo baxday Wasaarada Arrimaha Dibbada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo ku eedeysay dowlada Kenya inay faragelin ku heyso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Qoraalka ayaa dowlada Kenya ugu baaqday inay si deg-deg ah u joojiso “xadgudubyada ka dhanka ah madaxbannaanideeda iyo falalka xasillooni darrada ah ee ay ka […]
February 28, 2020 Duceysane947
February 28, 2020 Duceysane658
Bankiga Adduunka ayaa shalay sheegay inay caadiyeeyeen xiriirkii ay dawladda Soomaaliya la lahayd Bankiga Adduunka 30 sano kadib. Bankigu waxa uu sheegay inay tani ka dhigan tahay inay fursado u furto dawladda Soomaaliya, fursadahaas oo ay ka mid yihiin inay Soomaaliya hesho deeqaha uu bixiyo Bankiga Adduunka iyo inay wadashaqayn la lahaato dhammaan laamaha Bankiga […]
February 25, 2020 Duceysane719
Isuduwaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan Golaha Ammaanka Rodney Hunter ayaa si kulul uga hadlay xaaladda gobolka Gedo iyo ciidamada Dowladda Federaalka ay geysey magaalooyin ka tirsan gobolka Gedo. Rodney Hunter ayaa sheegay in sanadkan 2020-ka uu Soomaaliya u yahay sanad adag, maadaama ay dooneyso inay xal ka gaarto deyn cafinta, doorashooyinka qaranka iyo sidii […]
Xarunta waxbarashada gobolka banaadir oo xariga laga jaray
February 25, 2020 Duceysane931
Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta sare Cabdullahi Goodax Barre iyo Guddoomiyaha gobolka Banaadid ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finsh ayaa xariga ka jaray xarunta Waxbarashada gobolka Banaadir oo muda 30-sano kadib dib loo hirgaliyay. Xaruntaasi oo qeyb ka noqon doonto xoojinta adeegyada Waxbarashada, waxaana daahfurka xafiiskan goob joog ka ahaa hogaanada daladaha Waxbarasho ee […]
February 24, 2020 Duceysane706
Guddiga Joogtada ee Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Puntland go’aan ka gaaray khilaaf ka dhashay qofka noqonaya Kusimaha Madaxweynaha Puntland haddii Madaxweynaha iyo Ku xigeenkiisa ay dalka ka maqnaadaan. Khilaafkan ayaa waxaa uu u dhexeyay golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta iyadoo mid walba uu sheeganayay in uu leeyahay kusimaha Madaxweynaha. Guddiga Joogtada ah ee Golaha […]
February 24, 2020 Duceysane855
Xildhibaan Mahad Salad ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ugaga hadlay weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada ay ku lahaayeen Ceel Saliini halkaas oo ciidamo badan ay ku dhinteen. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa cinwaan uga dhigey qoraalkiisa; XASUUQA CEEL SALIINI ma xalbaa dowladu bidday mise waxaa jira qorshe durugsan oo lagu dabargoynayo wiilasheena?! Hubkaan iyo […]
February 24, 2020 Duceysane622
Wareegto kasoo baxdey Xafiiska Madaxweynaha ayaa waxaa xilkii looga qaadey Wasiirka Waxbarashada C/raxmaan Cusmaan Malaaq,Wasiirka Shaqada & Shaqaaaha Feysal Cabdullaahi Cali iyo wasiir kuxigeenka Wasaaradda Waxbarashada Jabriil Maxamuud Aadan. Sidoo kale Madaxwyene laftagareen ayaa xilka Wasiirka Waxbarashada u Magacaabey Maxamed Yuusuf Xasan, Wasiirka Shaqada & Shaqaalaha Cabduqaadir Cumar C/llaahi halka Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Waxbarashada loo […]
February 19, 2020 Duceysane1182
Maamul goboleedka Jubbaland ayaa ka hadlay iskahorimaad ku dhex maray ciidamo ku sii jeeday magaalada Dhoobley iyo dagaalamayaal Al-Shabaab ka tirsan. Saraakiil ka tiran ciidamada Jubbaland ayaa sheegay in Ciidamada Daraawiishta Jubbaland oo ka baxay magaalada Kismaayo kuna sii jeeday magaalada Dhoobley uu dagaal adag la galay dagaalamayaal Al-Shabaab ka tirsan kadib markii ay weerar […]